यी ‘३५’ बर्षिय आन्टिलाई रुम सेयर गरी बस्ने मर्द केटो चाहियो कोहि छ – भिडियो सहित
के जीवन बिताउन श्रीमान् नै चाहिन्छ त ? जीवन विताउनका लागि श्रीमान् वा श्रीमती नै चाहिन्छ त ? दाम्पत्य जीवन विताउनै पर्छ त ? यसमा एउटा ठूलो जमातले सहमतिको टाउको हल्लाउन सक्छन् ।
तर, एउटा जमात यस्ता पनि छन्, जो दाम्पत्यलाई ब`न्ध`न ठान्छन् र त्यसबाट उन्मुक्त जीवन विताउन राजी हुन्छन् । विवाह गर्नैपर्छ भन्नेमा सबैको रा-य मिल्छ भन्ने पनि छैन । कतिपय यस्ता हुन्छन्, जो विवाहलाई अनिवार्य ठान्दैनन् । उनीहरु विवाह नगरी एक्लो जीवन विताउनमै कल्याण मान्छन् ।
अहिले त केसम्म हुने गरेकाे छ भने, कुनै पुरुष वा महिलाबाट सन्ता-न जन्मा-उने र अविवाहित आमा वा बुवाको रुपमा जीवन विताउने सम्मकाे चलन भनाै एउटा मान्छेकाे साेचाई बन्न थालेकाे छ ।
याे पनि,जेठ महिनाको त्यो शनिबार , म आफ्नो कोठाभित्र पढ्न बसेकि थिएं । दिउँसोको त्यस्तै साढे बार बजेको हुंदो हो । बाहिर लागेको चर्को घामले रुखविरुवाका पातहरु लल्याकलुलुक भएर ओईलिएका थिए । थोपै हावा नचलेर बसिनसक्नु भएको थियो मेरो कोठा अझ त्यस माथी माथीबाट जस्ताको छानो तातिएर पग्लेला झैं भएको थियो । त्यो उधुम गर्र्मीमा म किताब खोलेर त बसेकि थिएं तर पढाईमा भने पटक्कै मन थिएन ।
बैसाख जेठको गर्र्मीमा केटीहरुलाई कुखुरा पालुं कि पोईला जाउं जस्तो हुन्छ भन्थे सांच्चै त्यस्तै भएको थियो मलाई । कोठाभित्र गुम्सिएर म अनेक रंगीन कल्पनामा डुब्दै थिएं । मेरो शरिरमा पातलो सुतीको म्याक्सी मात्र थियो । म्याक्सीभित्र पेण्टी र ब्रा फुकालेर मिल्काई सकेकि थिएं । एक त गर्मीले गर्दा शरिरमा टाँसिने कपडाहरु लगाउनै नसकिने त्यसमाथी यसरी रोमाञ्चित हुने कल्पनाको रंगीन संसारमा डुब्दा मलाई त्यस्ता कपडाहरुले अवरोध खडा गरेको महसुस हुने गर्छ ।
मेरो एकाग्रतामा खलल पुर्याउंदा मलाई झनक्क रिस उठ्यो तर ‘कहाँ छन् बाख्रा ?’ मैले सोधें । ू खै कुन्नी त कहाँ छन ? बिहान लगेर कहाँ खुटेकि थिईस ? ू आमाको जवाफले पो थाहा भयो बाख्राहरु त म आफैंले लगेर बिकाशहर्को खेतमा खुटाएर आकि थें । ू लु जा झट्ट , मरिसकेहोलान बाख्राहरु त ।ू
उसको तिखो चुच्चो नाक म्याक्सी बाहिरबाटै मेरो यो,नि,को माथ्लो भागमा धस्सिएको मिठो महसुस गरें मैले । सायद उसले पनि पहिलो पल्ट मेरो यौ,व,न,को मादक सुगन्धको अनिभुती गर्यो होला । उसले बिस्तारै टाउको उठाएर भन्यो ( ‘ तिमीलाई त लाज शरम केहि छैन सानी । अब त हामी ठुला ठुला भै सक्यौं त ।
कहाँ सानोको जस्तो गरेको ? ‘ मैले विकाशको हात छोडेकै थिइनं । छोड्यो भने उ भाग्छ भन्ने मलाई थाहा थियो । म विकाश संग सानोमा गरेका सबै कृयाकलापहरु दोहोर्याउन चाहन्थें । उसैले सानोको कुरा झिक्दा मलाई अझ अघि बढ्न सहज भयो र भनें – ‘ अनि के त ? सानोमा म अर्कै तिमी अर्कै थिईनौं त , सानोमा गर्न हुने अहिले गर्दा चैं के हुन्छ ? ‘ विकाशको अनुहार लाजले रातो भएको थियो । मेरो अनुहारमा पनि उत्तेजनाको लाली थियो होला ।
मेरो हातबाट आफ्नो हात छुटाउने प्रयत्न गर्दै विकाशले भन्यो , ‘ सानोको जस्तै अहिले गर्दा तिमी सांच्चैको आमा भयौ भने नि ? अब त सानोको जस्तो झुम्राको नानी जन्मिदैन त ? ‘ ‘ जन्मे के त ? बिहे गरेर बसौंला नि । कि तिमी मलाई बिहे गर्दैनौ ? म त तिमी बाहेक अरु संग त मरे नि बिहे गर्दिन । तिमीलाई त मेरो मायापनि लाग्दैन कि के हो ? ‘ रिसाएको नखरा पार्दै मैले भनें । विकाश अवाक भएझैं मेरो आँखामा हेर्न लाग्यो ।
उसको अनुहारमात्र हैन कानहरु पनि राता राता भएका थिए । उ आगोको समिप परेको नौनी झैं पलपल पग्लिंदो थियो । लाजले रातो भएको उसको अनुहारमा क्रमश उ,त्ते,ज,नाको रंग थपिंदै थियो । बिस्तारै उसले मेरो गालामा हात राखेर कपालका केश पन्साउंदै भन्यो ,’ लाग्छ नि सानी , धेरै धेरै लाग्छ तिम्रो माया तर माया लाग्छ भनेर जताततै पोख्दै हिंड्नु हुंदैन नि , हैन र ? ‘ बिकाशको आँखामा कताकता आँशु छचल्किएको थियो ।
उसले त मलाई चोखो माया साँचो अर्थमा गर्दोरहेछ । मैले पो बुझ्न नसकेको रहेछु उसको मायालाई । त्यसबेला मलाई आफ्नो उत्ताउलोपना देखेर एकैछिनको लागी आफैं संग एकैसाथ लाज र घिन लागेर आयो ।
मेरा आँखाभरी आँशु भरीए । त्यती धेरै जोश बोकेर विकाश संग या,ैन कृ,डामा लिप्त हुने अभिलाशा बोकेर आएकि मैले विकाश संग माफ माग्न पनि सकिनं । सायद उसले मेरो आँखाले गरिरहेको याचना बुझ्यो होला दुबै हातले मेरो दुबै गालामा भएको केशहरु पन्साउंदै लगेर कान मुन्तिर कसिलो गरेर समाई मेरो ओठमा चु,म्ब,न गर्यो ।
मेरा हातहरु विकाशको पाखुरा मुनितिरबाट पिठ्युँमा पुगेर उसलाई कस्न खोज्दैथिए । चुम्बनको क्रम केहिबेर चलिरह्यो । हामीदुबै एक अर्काको क्रमश दुबै ओठहरु चु,स्ने,क्र,ममा थियौं । मैले आफ्नो तल्लो ओठ उसको दुबै ओठको बिचबाट फुस्काएर फुस्फुसाएको स्वरमा उस्लाई थ्याङ्क यु आई लभ यु भनें । उस्तै स्वरमा बिकाशले पनि आई लभ यु टु भनेर मेरो जिब्रो माग्यो । मैले आफ्नो जिब्रो उसको मुखभित्र छिराएं ।
बडो तन्यमताका साथ विकाशमेरो जिब्रो च,ुस्न लाग्यो । जि,ब्रो चु,सा,उ,नुको आनन्द मलै पनि भै रहेथ्यो । पालैपालो हामी एक अर्काको जिब्रो चु,स्तै गर्दा बिकाशको हात मेरो स्,त,नमा खेल्न लागिसकेको थियो । मलाई केहि हिम्मत बढ्यो र अनुरोध गरें , ‘विकाश आज एक पटक सबै गरौं न प्लीज । ‘ हामी दुबै जिब्रो च,ुस्ने क्र,ममा तौलियामाथी लडिसकेका थियौं । अहिले बिकाशको मुख म्या,क्सी,बाट जबर्जस्ती बाहिर निस्किंदै गरेको मेरो दाईने स्,त,न,मा थियो ।
यौटा हातले उसले मेरो घुचुकमा कपालको केश मुठ्याएको थियो भने अर्को हात मेरो यो,नि क्षेत्रतिर डुलाउंदै थियो । यस्तोबेलामा सायद शरिरलाइ दिमागले नियन्त्रणमा रख्न सक्दैन होला मेरो हात विकाशको घुँडासम्म आउने हनुमाने क,ट्टुभित्र पसेर कडा लि,ङ्ग संग खे,ल्न लागे ।
सानोमा देखेछोएको भएपनि जवानभएपछि कल्पना मात्र गरेको विकाशको लि,ङ्ग मेरो कल्पनामा झैं ल,म्ब,ाई र गोलाईमा थियो । सानोमा उसिनेको सखरखण्डको त्यान्द्रो जस्तो देखिने बिकासको …. अहिले मेरो मुठ्ठीमा अटाई नअटाई थियो । बाँकी अंश अर्को भागमा—– हाम्रा अन्य समाचार पनि पढ्नुहोला….
२०७८ भाद्र १, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 858 Views